Sharcidaro Lagu Tilmaamay Shaqo ka Joojintii Gudoomiyaha Maxkamadda Gobolka Banaadir
Abukaate C/waaxid Cismaan Xaaji oo ka mid ah Qareenada Somaliyeed ayaa sharcidaro ku tilmaamay go’aanka uu Gudoomiyaha Maxkamadda Sare ee dalka Ibraahim iidle Suleymaan uu shaqadii ugu joojiyay Gudoomiyaha Maxkamadda Gobolka Banaadir, Dr. Xaashi Cilmi Nuur.
Abukaate C/waaxid Cismaan Xaaji oo ka mid ah Qareenada Somaliyeed , ayaa isagu sheegay in shaqo joojintaasi aanay waafaqsanayn sharciga.
“Shaqo joojinta lagu sameeyay Gudoomiyaha Maxkamadda Gobolka Banaadir ma waafaqsana sharciga, mana jirto meel ay kaga taalo sharciga. Waxaan cadeynayaa inaysan waafaqsanayn Xeer Nidaamka Garsoorka.” Ayuu yiri Abukaate Xaaji oo la hadlay Universaltv.
Gudoomiyaha Maxkamadda Sare ee Dalka, mudane Ibraahim Iidle Saleebaan, ayaa Digreeto uu soo saaray dhawaan si ku meel gaar ihi shaqadii uga joojiyay Gudoomiyaha Maxkamadda Gobolka Banaadir, sababo ku aadan inaanu shaqada si habsami leh u gudan, isla-markaana ay jiraan shaqooyin badan oo is dulsaaran.